Man City oo ku soo laabatay hogaanka Horyaalka Ingiriiska iyo Man United oo la garaacay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
4th May 2014 MAREEG Af Soomaali 0
MAREEG.COM-Kooxda Manchester City ayaa dib ugu soo laabatay hogaanka Horyaalka Ingiriiska, iyadoo rajo ka qabto in saddex sano kadib inay ku guuleysto Horyaalka Primeir League ee EPL, kadib ciyaar kulul oo ka dhacday garoonka Goodison Park oo ay marti ugu aheyd Everton ugu awood sheegatay 2-3.
Man City ayaana sameysay dib u soo kabasho cajiib ah, kadib markii daqiiqadii 11aad gool looga naxsaday, waxaana uu ahaa gool aad u qurux badnaa oo ciyaaryahan Barkley ku fara yareystay, markii uu gaaday goolhaye Ian Hart kubad aanu filaneyd oo aheyd mid uu soo duubay ay shabaqa kor ka gashay.
Laakiin Aguero ayaa u bar bareeyay daqiiqadii 22aad ee qeybta hore, kadib kubad uu ka helay Yaya Toure, si awood lehna u galay xerada ganaaxa, dabadeedna darbo hoose uu dhinac ka mariyay gooryahaye Tim Howard.
Bar barahan ayaa neefta ku soo celisay Man City, iyadoo kulankan uu u ahaa muhiim, maadaama uu baaqi u sii ahaa, waxaana guusha ugu xirneyd ay la mid aheyd sidii ciyaar Final ah.
Man City ayaa hogaanka qabatay daqiiqadii 43aad wax yar ka hor dhamaadka qeybta hore, waxaana u saxiixay Edin Dzeko oo madaxeeyay kubad loo soo karoosay, isagoo aan wax fursad ah siin goolhaye Tim Howard.
Qeybta labaad ayaa markii la isku soo laabtay ayaa kubad uu marba dhinac ugu kala ged-gedinayay daafacyada Man City ciyaaryahan Barkley oo uu siiyay Ian Smith kubadiisa waxaa ka bixiyay goolhaye Hart, waana kubad gool loo filanayay oo Everton ku bar bareyn laheyd Man City.
Daqiiqado kadib Man City waxaa hogaanka u dheereeyay Dzeko, kadib baas uu ka helay Nasri, dabadeedna uu shabaqa ku hubsaday, waxaana ciyaarta ay noqotay 3-1.
Ciyaaryahan Lukaku ayaa kubad uu madax ku dhaliyay gool u soo celiyay kooxdiisa Everton, ciyaartana ka dhigay 3-2, waxaana isku dayo badan ay sameeyeen u suura geli weysay inay keenaan goolkii bar baraha, maadaama daafaca Man City uu aad u adkaa.
Man City ayaa hogaanka la qabatay Liverpool, iyagoo wada leh 80-dhibcood, balse farqiga goolasha ayaa waxaa dheer Man City, waxaana la saadaalinayaa inayba dhici karto in si la mid ah xilli ciyaareedkii 2011/2012 in Manchester City horyaalka ku qaado, xilligaasoo isku dhibco ahaayeen Manchester United, balse ay farqiga goolasha ay dhalisay dheereyd.
Sidoo kale ciyaartihii kale kooxda Manchester United ayaa guuldaro xanuun leh ka soo gaartay kooxda Sunderland oo u dagaalameysay in aanay ka harin Horyaalka, maadaama ay ku jirtay kooxaha ugu dhibcaha hooseeya, waxaana ay 46-sano kadib Old Trafford uga badisay Manchester United.
Tababaraha KMG Ryan Giggs ayaa la kulmay guuldaradii u horeysay, waxayna tani calaamad gelineysa in kooxdu wali u baahan tahay Tababare qibrad leh, waxaana la hadal hayaa tababaraha reer Holland Louis Van Gaal
Dhinaca kooxaha Fulham iyo Carrdif City ayaa dib ugu laabtay horyaalka heerka labaad, kadib markii labada kooxood ay guuldarooyin la kulmeen, Fulham waxaa 4-1 uga badisay kooxda Stoke City, halka Newcastle United ay 3-0 uga badisay kooxda Carddif oo sanadkan ku cusbeyd Horyaalka Premier League.